डा. केसीलाई सास फेर्न गाह्रो – pahilobiz
आज एकै दिनआठ सय भन्दा बढीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि, थप बार जनाको मृत्यु
आईपीएल : पन्जाबलाई चेन्‍नईले १० विकेटले हरायो
डा. केसीलाई सास फेर्न गाह्रो
अस्पतालबाट निस्किएर ट्रम्प जब समर्थकहरू सामुन्ने पुगे
अनशनरत डा केसीका मागबारे वार्ता टोली गठन गर्न चिकित्सक संघको माग
आईसीयूमा भर्ना हुन सल्लाह दिँदा उहाँ मान्नुभएन । होस रहुन्जेल जतिसुकै राम्रो नियत भए पनि हामीले बलजफ्ती गर्न मिल्दैन । – डा. सुवासप्रसाद आचार्य
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग गर्दै २१ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बनेको छ । चिकित्सकहरूले आईसीयूमा भर्ना हुन आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका छन् ।
तस्बिर : तोसिमा कार्की
सास फेर्न असजिलो हुने, अक्सिजन आवश्यक पर्ने र बेलाबेला मुटुको चालमा गडबडी हुने अवस्थालाई हेरेर आईसीयूमा भर्ना हुन सल्लाह दिँदा भने डा. केसीले अस्वीकार गरेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डा. सुवासप्रसाद आचार्यले भने । ‘कुनै पनि व्यक्तिको होस रहुन्जेल जतिसुकै राम्रो नियत भए पनि चिकित्सकले बलजफ्ती गर्न मिल्दैन । होस नभएको स्थितिमा मात्र आफ्नो निर्णय लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
१९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीको बीचबीचमा मुटुको तीव्र धड्कन हुने समस्या देखिएको छ । छाती, मांसपेशी दुख्ने र बाउँडिने, चक्कर लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि बढेका छन् । पछिल्लो रगत परीक्षणअनुसार ब्लड सुगर धेरै कम छ । सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस) कमी देखिएको छ । शरीरमा पोटासियम र म्याग्नेसियमको स्तर कम हुँदा मुटुको चालमा, सोडियम र क्याल्सियम कम भए मस्तिष्कमा असर परी होस कम, छारे हुन सक्ने डा. आचार्यले बताए । ‘मुटुको चालमा गडबडी भएर कार्डियाक अरेस्ट (एक्कासि मुटुले काम गर्न छोड्नु) सम्म हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य स्थितिप्रति सबैको थप चासो आवश्यक छ ।’
डा. केसीले ‘इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेन्ट’ लगायतका अन्य तरल पदार्थ लिन अस्वीकार गरेका छन् । उनको रगतमा सेता रक्त कणिकाको संख्यासमेत कम भएकाले संक्रमणसम्बन्धी जोखिम उच्च छ । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र अन्य संक्रमणको जोखिमका कारण हाल आगन्तुकलाई डा. केसीसँग भेटघाट गर्न रोक लगाइएको छ । सास फेर्दा उत्पन्न हुने आवाज डा. केसीको दाहिनेपट्टि तल्लो भागमा कमी पाइएको छ । ईसीजी र छातीको एक्सरे भने सामान्य छ । आपत्कालीन अवस्था नआओस् भनेर नसा खुल्ला राख्न नर्मल सलाइन चढाइराखिएको छ ।
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आइतबार धर्नामा बसेका चिकित्सक । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर
नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई ७२ घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरेर माग सम्बोधन गर्न चेतावनी दिएको छ । डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर मोडमा पुगेपछि चिकित्सक संघले विशेषज्ञ समाज, पूर्वअध्यक्ष/महासचिव, उपत्यकाका अस्पतालका निर्देशकहरू र परिषद् सदस्यहरूसँग बृहत् छलफल गरेपछि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको हो । संघले वार्ताका लागि सहजीकरण गर्नसमेत तयार रहेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्कीले यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन आइतबार दुई घण्टा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले इमर्जेन्सी र कोभिड–१९ बाहेकका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नभएर अस्पताल प्रांगणमा धर्ना दिएका हुन् ।
२४ घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरी डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकार अग्रसर नभए सबै आवासीय चिकित्सकले थप कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनीहरूले जनाएका छन् ।
नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा.सुभाष देवकोटाले सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले सोमबारबाट आन्दोलन चर्काउने तयारी भएको बताए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करिब ८ सय रेजिडेन्ट चिकित्सक छन् ।